कुलमान घिशिंङ्गलाइ यु.ए.इ.बाट अनुरोध :- मीन बहादुर पण्डित, हाल दुबई युएइ - Janapukar
प्रवास अमेरिका समाचार साहित्य भिडियो विचार हास्य टेलिचलचित्र सम्पर्क कुलमान घिशिंङ्गलाइ यु.ए.इ.बाट अनुरोध :- मीन बहादुर पण्डित, हाल दुबई युएइ
संसारमा यस्ता पनि व्यक्ति जनमिन्छन, जसले कहिले पनि आफ्नो नैतिकता, इमान्दारिता र धर्यतालाइ गुमाउदैनन । कहिले पनि लोभ लालचमा पर्दैनन्, अरुको सम्पतिमा कहिले आँखा लगाउदैनन । देश सेवा र समाज सेवा उनीहरुको रगतमै बगेको हुन्छ । यस्ता इमान्दार र कर्तब्य निस्ट व्यक्तिलाई समाजका सबै बर्गले चिन्न र बुझ्न सकेका हुदैनन् । भनिन्छ हरेक मान्छेका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षहरु हुन्छन । कशै कशैको त् सकारात्मक पक्ष यति बलियो हुन्छ कि त्यसले उसको नकारात्मक पक्षलाइ नै छायामा पारिदिन्छ, त्यस्तो व्यक्तिका रुपमा उर्जा मन्त्रि जनार्दन सर्मालाई लिन सकिन्छ । तर कुलमान घिशिंगका ज्यु को नकारात्मक पक्ष भेट्न गारै पर्ला । जसरि मनमोहन अधिकारि र मदन भण्डारीको नैतिकता र इमान्दारिता माथि कशैले पनि प्रश्न उठाउन सक्दैनथ्यो । कुलमान घिशिंग पनि त्यस्तै व्यक्ति हुन् भन्ने कुरामा कुनै संखा छैन ।
इमान्दार र कर्तब्य निस्ट भएर सिंगो नेपाललाइ लोड शेडिंग मुक्त बनाउने अभियानमा लागेका कुलमानको गुन आम नेपालीले कहिले पनि बिर्सन सक्दैनन् । त्यशैले कुलमान घिशिंगको नैतिकता र इमान्दारिता माथि शंखा गर्नु अन्याय पूर्ण हुन् जान्छ । यदि उनले चाहेको भए दुइ तिन घण्टा लोडशेडिंग गराएर पनि करोडौ कमिसन खान सक्ने होला । दुर दरारका गाउका मान्छेले पनि कुलमानको नैतिकता राम्रै संग बुझेका छन । त्यशैले केहि अबुझ व्यक्तिहरुले आरोप लगाउदैमा दुस्ख मान्नु पर्ने स्थिति बिल्कुल छैन । कुलमान बिसुद्ध निजामति कर्मचारी हुन्, उनलाई राजनीतिक पार्टी संग लिना दिना केहि छैन । सरखारी कर्मचारीले राजनीति गर्न हुदैन भनेर उनले राम्रो संग बुझेका छन् । एदी उनलाई कुनै पार्टी प्रति आस्था छ भने त्यो उनको व्यक्तिगत कुरा हो । त्यशैले यो बिषयलाइ लियर कशैले पनि राजनीतिक फाइदा लिन खोज्नु हुदैन । र कुलमान कुनै राजनीतिक पार्टीको ब्रान्ड एम्बेसीडर पनि होइनन र दाइजो पनि होइनन । जसले कुलमानको प्रतिभालाइ चिनेर ठाउ दियो, त्यो व्यक्ति जुन पार्टीको भए पनि तारिफ गर्ने पर्छ ।
नेपालको सार्बजनिक खरिद ऐनुु कि परिमार्जन गर्नुपर्दछ, कि खारेज नै गरिनु पर्दछ । बिध्यमान सार्बजनिक खरिद ऐन मार्फत लामो टेन्डर प्रक्रियामा जादा छ महिना देखि एक बर्ष सम्म लाग्न सक्छ, जसले गर्दा एक बर्ष सम्म चाहिएको समान प्रयोग गर्न नपाउदा करोडौ घाटा त लाग्छ नै त्यो भन्दा पनि ठुलो घाटा छ महिना पछि बजार भाउ बडेर हुने गर्दछ । त्यशैले यो सार्बजनिक खरिद ऐनलाइ समय सापेक्ष बनाइनु नितान्त जरुरि छ । बिगतमा सराखारले बिना टेन्डर ठुला रकमको समान खरिद गर्न खोग्दा सार्बजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत अदालतमा रिट परेर त्यस्ता खरिद रद्द भएको थुप्रै घटनाहरु छन् । त्यशैले सरखार संग केहि बिसेस अधिकार छ भने मात्र यो खरिद प्रक्रिया अगाडी बढ्न सक्छ । नत्र भने देश र जनताको हितमा हुदा हुदै पनि अदालतमा रिट परेर यो खरिद प्रक्रिया नै रद्द हुन सक्ने स्थिति छ । किनकि नेपालमा गर्ने भन्दा गर्नेको खुट्टा तानेर बिगार्ने धेरै छन । कुनै पनि बुझ्ने नेपालीहरुले अदालतमा रिट हाल्नु हुदैन र रिट परि हाले पनि परिस्थिति बुझेर अदालतले देश र जनताको हितमा फ़ैशल्ला गरिदिनु पर्दछ । कुरा सहि हो बिना टेन्डर खरित गर्दा प्रतिसप्रधा हुन पाउदैन र केहि महँगो पर्न जान पनि सक्छ, तर त्यसमा पनि २ वटा कुरा छन् । एउटा ठुलो परिमाणको समान खरिद गर्ने हुनाले सके सम्म डीसकाउन्ट माग्ने, डीसकाउन्ट पाउने स्थीति रहे नरहेको जानकारी जनतालाई गराउने । दोश्रो सामानको मुख्य उत्पादक कम्पनि संग सिधै सम्पर्क गरेर किन्ने कोशिस गर्ने । यो दुवै प्रयास सम्भब भएन, त्यशैले भारतीय कम्पनि संग नै किन्नु पर्ने बाध्यता भयो भनेर जनतालाइ कुरा बुझाउने । टेन्डर गर्दा पनि भस्टचार भएका धरै घटनाहरु छन्, त्यशैले टेन्डर गर्दा चाँही भस्टचार हुदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? टेन्डर गर्दा कम्पिडिसनले अलि सस्तोमा पाहिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो । टेन्डर गर्दा सस्तोमा पाउने परिस्थिति छ कि छैन, सरखारले बिबेक प्रयोग गरेर अगाडी बढ्ने कुरा हो । तर बिसेस परिस्थितिमा बाहेक अन्य खरिदारी वा ठेक्का पट्टामा टेन्डर गर्नुको बिकल्प छैन । टेन्डर गर्न नपर्ने हो भने त जसलाई जतिमा ठेक्का दिए पनि भयो । यसले त् मनपरी गर्नेलाई सजिलो पारिदिन्छ र कम्पिडिसन हुन् नपाउदा महँगोमा सम्झौता हुने डर रहन्छ ।
टेन्डर गर्दा गुणस्थरिय समान नपर्न पनि सक्छ । एदी समान गुणस्थरिय भएन भने एक बर्ष टिक्ने बल्ब छ महिना पनि नटिक्न सक्छ । त्यशैले क्वालिटीमा कुनै सम्झौता गर्नु हुदैन । फिलिप कम्पनि लाइटका लागि बिश्वाशिलो र बिश्व प्रसिद्ध छ । अर्को कुरा एदी नेपालमा बर्षको चार अरबको एलईडी बल्बको माग छ भने, फिलिप कम्पनि वा त्यस्तै कम्पनि संग कुरा गरेर नेपालमै कारखाना खोलेर यहीँ उत्पादन किन नगर्ने ? सके आफैले एलईडी बल्ब उत्पादन कम्पनि खोले पनि झन् राम्रो हुन्छ । सुरुमा बिदेशी प्राबिधिक र प्रबिधि ल्याएर कम्पनि खोल्ने, पछि त् नेपाली प्राबिधिकले पनि काम सिकी हाल्छन । एदी यशो गर्न सके अरबौ रकम बिदेसिन बाट बच्ने थियो र रोगजारी पनि सृजना हुने थियो । बर्षौ देखि घाटामा चलेको नेपाल बिधुत प्राधिकरण कुलमान घिशिंग ज्यु कै कारणले नाफामा जाने स्थितिमा पुगेको छ । र केहि बर्षमा बिजुली निर्यात गर्ने स्थितिमा पुगेको छ । कुलमान सर अब बिधुत प्रयोग गरेर खाना ग्यास बाट पकाउने तिर लाग्नु पर्छ । त्यसको लागि नेपाल बिधुत प्राधिकरनले नै एलईडी बल्ब किने जस्तै इन्डक्सन चुलो किनेर जनतालाई सस्तोमा दिलाउनु पर्छ । सस्तो र सुलभ भए जसले पनि किन्नेछन । यशो गर्दा अर्बौको ग्यास जोगिने छ । मेट्रो रेल र सबारी साधन पनि बिजुली बाट नै चलाउने तिर लाग्नु पर्छ जसले गर्दा अर्बौको पेट्रोल जोगिन्छ । चीन बाट आउने भनेको ३० वोटा बिदुतीय बस किन आएन । त्यो ल्याउने तिर सरखारको ध्यान आकर्सण गराउनु होला । बिस्तारै कल कारखाना खोलेर बिधुतिय समान र इन्डक्सन चुलो नेपालमै बन्ने बाताबरण बनाउनु पर्छ । सधै बिदेशी समान किन्दा किन्दा देश र जनता गरिब भए । अब नेपाली रुपैया बिदेसिन दिनु हुदैन । अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुरा के भने धेरै अरब देशले आफ्ना नागरिकलाइ फ्री मा ल्याण्ड लाइन टेलिफोन सुबिधा, फ्रीमा बिजुली र रासन दिन्छन । हामि पनि गरिब नेपालीलाई सित्तैमा बिजुली दिन सक्छौ । त्यो कसरि भने, एदी हामीले विदेशीलाई हजार मेगावाटका ५ वटा आयोजना मात्र बनाउन दिने हो भने पनि हाम्रो नदि र ठाउ उपयोग गरे बापत पाउने २ छ ५फ्री बिजुलीले नेपाल भरिका सर्बसाधारणलाइ सित्तैमा दिन सकिन्छ । त्यशो गर्दा गरिबी ह्वातै घट्छ । साएद २० ५ जति बिजुली मात्र सर्बसाधारणले प्रयोग गर्छन होला । कुलमान सरले गर्दा नै सारा नेपालीले उद्योग धन्दा चलाएर गरि खान पाएका छन्, । उज्यालोमा पडन र खाना खान पाएका छन्, न त्र बेलुका खाना बनाउने बेलामै बत्ति काटिन्थ्यो । पहिले विदेश बाट मोबालमा फोन गर्न पर्थ्यो , इमो वा इस्काइप चलाउन बत्ति नभएर इन्टरनेट नै चल्दैन थियो । अहिले विदेश बाट फोन गर्ने हाम्रो धेरै पेशा बचेको छ । ६० लाख बिदेशी मध्य ७५ ५ नेपालीले इन्टरनेटका मध्यमले नेपालमा परिवार संग कम्युनिकेसन गर्छन होला । यदि लोड सेडिंग भै रहेको भए महँगो सुल्क तिरेर फोन नगरी कुनै उपाए नै थिएन । त्यशैले कुकुर भुक्दै गर्छ हात्ती चल्दै गर्छ । कुकुर भुक्दैमा हात्ती रुदैन । नबिराउनु न डराउनु भन्ने नेपाली उखान छ । ३ करोड नेपाली हजुरको साथमा छन् । त्यशैले अलिकति पनि बिचलित नहुनु होला । इमान्दार मान्छे रुदा देश रुन्छ, सत्य रुन्छ, त्यशैले झिना मसिना कुरा गर्नेहरुको कुरामा चित्त नदुखाउनु होला । हजुरले जे गर्नु भयो, त्यहि ठाउमा अरु पुगेको भए , बजेट छैन, साधन छैन, मेनापावोर छैन आदि अनेक बाहना गरेर तलब खाएर विदेश भ्रमण गरेर बस्ने थिए । गर्ने मान्छेलाई श्रोत र साधनको कमि हुदैन भन्ने उदारण हजुरले देखाउनु भएको छ । एदी हजुर जस्तो मान्छे सबै क्षेत्रमा हुदो त् ६० लाख नेपाली बिदेशिनु पर्ने थिएन । र देश सम्पन्न भै सक्थ्यो । हजुरको कामले देशमा परिबर्तन सम्भब छ है भन्ने ठुलो आसा जगाएको छ । हजुरले यो आशलाई कदापि मर्न दिनु हुदैन, किनकि यो आशा हरेक गरिब नेपालीहरुको भबिश्य संग जोडिएको छ । यो बास्तबिकता हरेक नेपालीहरुले बुझ्न जरुरि छ । तपाईंको खबर